လက္ကား PET Beverage ဖလားထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်း | Copak
PET Ice Cream ဖလား
PET Portion ဖလား
ပုံနှိပ်ထားသော PET ဖလား
တရုတ်ပြည်ရှိ PLA ပုလင်း
တရုတ်နိုင်ငံရှိ PET ပုလင်းထုတ်လုပ်သူ
PET Beverage Cup
ကော်ဖီ -PET အဖျော်ယမကာဖလား။ ၎င်းပစ္စည်းသည် PET (Polyethylene Terephthalate) ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အဖျော်ယမကာထုပ်ပိုးရာတွင်အဓိကအသုံးပြုသည်ကို၎င်း၏အမည်မှသိနိုင်သည်။
ငါတို့ဘာကြောင့် PET ကိုသုံးတာလဲ။ ဒီပစ္စည်းဖလားကို ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှာတရုတ်ပြည်မှာထွက်လာတယ်။ Polyethylene Terephthalate (PET) ပစ္စည်းသည် Eco-friendly ဖြစ်ပြီးကြည်လင်ပြတ်သား။ ကြည်လင်ပြတ်သား။ ကြာရှည်ခံသည်။
1. အရောင်: Crystal-clear, ဒါမှမဟုတ်ထုံးစံပုံနှိပ်
၂။ ပစ္စည်း - Polyethylene Terephthalate (PET)
3. Lid: ပြားချပ်ချပ်အဖုံးသို့မဟုတ်အမိုးခုံးအဖုံး
၄။ အသုံးပြုမှု - အချိုရည်၊ အဖျော်ယမကာ၊ ရေခဲမုန့်၊ နို့၊ လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်၊ သစ်သီးဖျော်ရည်၊ ပူဖောင်း၊ ကော်လာနမူနာ၊ ဘီယာ၊ ခြံ၊ ကဖေး၊ ဝိုင်၊ ဝိုင်၊ သစ်သီးဝလံ၊ သကြားလုံး၊ Milkshake / Salad / Noodle
5. အထုပ်: 25pcs / လက်, 20sleves / CTN
၆။ MOQ: ၃၀,၀၀၀ pcs (အရေအတွက်များလေ၊ စျေးနည်းလေဖြစ်တယ်)
၇။ ဆိပ်ကမ်း - နိုက်ဘိုသို့မဟုတ်ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ်
8. အသုံးပြုမှုအပူချိန်: အကြမ်းခံနှင့်အက်ကြောင်း - ဒဏ်ခံ, ရေခဲသေတ္တာခုခံ
PP: -20 ° C မှ 120 ° C, PS:0° C ~ 75 ° C ° C, PET: -30 ° C ~ 70 ° C
ကော့တ် PET အဖျော်ယမကာဖလားကြံ့ခိုင်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်။ သင်သည်မည်သည့်ဖက်ရှင်ပုံစံများသို့မဟုတ်အရွယ်အစားဒီဇိုင်းနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤနယ်ပယ်၌နှစ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိရရှိနိုင်သောအသံအတိုးအကျယ်နှင့်အရွယ်အစားကွဲပြားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ catalog မှလည်းရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
တစ် ဦး နှင့်အတူတွဲ PET အဖျော်ယမကာခွက်ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အဖုံးသည်ပြီးပြည့်စုံသောပါဝင်မှုမျိုးစုံပါဝင်သောသွားလာရင်းထုပ်ပိုးမှုကိုဖန်တီးရန်ထောက်ပံ့ပေးသည်။ Takeaway ဗန်းလည်းတပ်ဆင်ထားသည် ဒါဟာတစ်ခါသုံးဖြစ်ပါတယ်PET အဖျော်ယမကာခွက်ကို, သင်၏အဖျော်ယမကာပျော်မွေ့ပြီးနောက်, ကိုယ့်ကိုဖုန်မှုန့်အမှိုက်ပုံသို့ပစ်။ သို့သော်၎င်းသည် ၁၀၀% ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ငါတို့ PET အဖျော်ယမကာဖလားလူကြိုက်များသောအရက်သောက်လယ်ပြင်၌အရက်ဆိုင်များ, စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ကော်ဖီဆိုင်များနှင့်ကမ္ဘာတဝှမ်း Boba လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များ။ ကော့တ်PET အဖျော်ယမကာခွက်ကိုအစားအစာတန်းနှင့် 100% လိုက်နာမှုရှိပါတယ်။ ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်အားလုံးသည်ဖုန်မှုန့်ကင်းစင်သည့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင်ပြီးဆုံးခဲ့ပြီး FDA / BRC / QS / SGS / LFGB / ISO9001 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်ကြိုဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းပါက Win-Win အကျိုးကျေးဇူးကိုသင်နားလည်လိမ့်မည်။
ဦး ထုပ် tag များ: PET အဖျော်ယမကာခွက်ကို, စားနပ်ရိက္ခာတန်း, အနိုင်ရအကျိုးခံစားခွင့်, အအေးသောက်။
ရှေ့သို့ Milkshake ဖလား
နောက်တစ်ခု: PET Clear ဖလား
92mm PET ခွက်
၉၂ မီလီမီတာ PET ဖလား Cup ၉၈ မီလီမီတာ PET ဖလား、 ထုံးစံအတိုင်း PET ခွက်、 PET ခွက်များနှင့်အဖုံးများ、 PET ဖလားလက်ကားများ、 PET Deli ခွက်များ、 PET Milkshake ဖလားများ、 ပေ tion ကပ်ခွက်များဖြင့်、 ပေ Por အပို Cup ခွက်、 ပေ Sm ဖျော်ရည်ခွက်、 ပုံနှိပ်ထားသော PET ဖလား
98mm PET ဖလား
စိတ်ကြိုက် PET ခွက်
PET ခွက်များနှင့်အဖုံးများ、 PET Cups လက်ကား、 PET Deli ဖလား、 PET Milkshake ခွက်များ、 PET အပိုံခွက်များ、 PET ချောကလက်ခွက်များ、 ပုံနှိပ်ထားသော PET ဖလား、 98mm PET ဖလား、 စိတ်ကြိုက်ပေကပ်ခွက်、 အိမ်မွေးပက်ဖန်ခွက်များနှင့်အဖုံး、 ပေတိုင်ခေါက်လက်ကား、
PET Deli ဖလား
PET Milkshake ဖလား
အဖုံးများနှင့်အတူ PET Portion ခွက်
ဒုတိယထပ်၊ ၁၁ အဆောက်အ ဦး၊ အမှတ် ၉၈၈ Zhongchun လမ်း၊ မင်းဟန်ခရိုင်၊ ရှန်ဟိုင်း။
Shanghai Copak Industry Co, Ltd Sourcin ...
၃၀ ကြိမ်မြောက်ရှန်ဟိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ality ည့်ဝတ်ပြုခြင်း ...